Newcastle United oo Ka Badisay Kooxda Everton “Sawirro” – Radio Muqdisho
Newcastle United oo Ka Badisay Kooxda Everton “Sawirro”
Kooxda Newcastle United ayaa garoonkeeda St James’ Park 3-2 uga badisay kooxda Everton
Kooxda Everton ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii shanaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Arouna Kone.
Ciyaaryahan Papiss Cisse ayaa daqiiqadii 34-aad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Newcastle United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Ayoze Perez ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Ciyaaryahan Jack Colback ayaa daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Ciyaaryahan Kevin Mirallas oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Everton.
Kooxda Newcastle United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Everton ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 21-dhibcood.
Tottenham Hotspur iyo Manchester United oo Bareejo Ku Kala Baxay